Trafalgar Square, tsy maintsy atao any London | Vaovao momba ny dia
Londres io no tanàna tsara indrindra tanànan'ny cosmopolitan. Mino aho fa amin'ity lafiny ity dia mihoatra an'i New York izy, ary na dia olana ankehitriny aza ny fifindra-monina, dia nanome tombokase tokana sy mamiratra azy ny firoboroboan'ny foko tonga tato anatin'ny folo taona.
Iray amin'ireo toerana famantarana ny renivohitra anglisy ny Kianjan'i Trafalgar, efamira amin'ireo izay tsy azonao adino.
1 Kianjan'i Trafalgar
2 Inona no jerena ao amin'ny Kianjan'ny Trafalgar
Kianjan'ny Trafalgar dia any Londres afovoany ary araka ny asehon'ny anarany dia nomena anarana ho fanomezam-boninahitra an'i Adin'i Trafalgar starring ny tafiky ny Napoleon sy ny tafika an-dranomasina anglisy. Nitranga io ady an-dranomasina io 21 Oktobra amin'ny 1805 ary teo amin'ny lafiny anglisy, Suède, Naples, Austria ary Russia koa dia niady tamin'i, mazava ho azy, Napoleon.
Ny Battle of Trafalgar dia mitranga eo amin'ny moron'ny Cape amin'ny an'io anarana io, any Cádiz, Espana, ary ny maherifon'izany dia niafara tamin'ny Vice Admiral Nelson. Ity fampahalalana ity dia fototra raha ny amin'ny fahalalana ny kianja. Kianja izay, tsara ny milaza, efa nisy talohan'ny ady manan-danja fa nanana anarana hafa: Guillermo IV.
Fotoana kely taty aoriana, manodidina ny 1820, ny Mpanjaka George IV dia nanendry ny mpanao mari-trano lamaody, John Nash, mba hampivelatra ity faritra London ity ary tamin'izay fotoana izay no nahazoany ny endriny ankehitriny. Tonga ihany koa ny fotoana ivon'ny fampisehoana sy fety malaza.
Ity kianja ity dia manana endrika manaraka: manana fo izy ary ny arabe dia avy amin'ny telo amin'ny sisiny, raha amin'ny fahefatra dia misy tohatra mankany amin'ny National Gallery. Folo taona mahery lasa izay, afaka namakivaky ny kianja namakivaky ny iray tamin'ireny làlana ireny ny fiara fa tsy azo atao intsony, ary ankehitriny dia any ambanin'ny tany ny fiampitana.
Inona no jerena ao amin'ny Kianjan'ny Trafalgar
Raha ny fitsipika, ny Ny tsangambaton'i Nelson. Sanganasan'i William Railton izy io ary manome voninahitra ny asan'i Horatio Nelson, amiraly britanika izay nandresy tamin'ny ady tao Trafalgar nefa koa maty. Ny tsanganana dia asan'i 1840 rehefa nankalazaina ny fahafatesany ary efa 46 metatra ny haavony. Vita amin'ny granite izy io ary mitazona ny sarivongan'i Nelson izay mahatratra 5,5 metatra ny haavony.
La Sarivongana Nelson mitodika mianatsimo mankany amin'ny lapan'ny Westminster. Ho setrin'izany, ny tsanganana dia manana renivohitra miorina amin'ny korintoana, aingam-panahy avy amin'ny Forum of Augustus any Roma, ary voaravaka takelaka varahina nalaina avy tamin'ny tafondro anglisy.
Izy io koa dia manana zana-kazo miendrika toradroa misy takelaka milaza ny fandresen'i Nelson efatra: Trafalgar, nefa koa Conpenhague, Cabo de San Vicente ary Nilo. Ireo takelaka ireo, izay isa efatra, dia vita tamin'ny alimo vy an'ny fitaovam-piadiana frantsay voasambotra. Hahita liona vitsivitsy ihany koa ianao, miaraka amin'ny sonian'ny mpanakanto Edwin Landseer, eo am-pototry ny tsanganana, ary vita amin'ny alimo avy amin'ny fananganana fitaovam-piadiana espaniola.
Ny Colony Nelson dia zahana isaky ny roa taona mba hikarakarana, hanadio ary hanamboarana ilaina. Esorina ny voromailala, apetraka amin'ny varahina, toy izany ny savoka. Ankoatr'ity tsangambato ity ny loharano dia misy loharano vitsivitsy izay nampiana an-tsehatra tamin'ny taona 1845. Manana mermaids, mermen ary dolphins izy ireo saingy niseho kely taty aoriana. Mahalana no tsy mandeha ireo loharano.
Amin'ny lafiny iray dia misy sarivongana eo amin'ny kianja. Ireo sarivongana varahina dia an'ny Jeneraly Sir Charles James Napier, any atsimo andrefana, ny Jeneraly Sir Henry Havelock, atsimo atsinanana ary ny Mpanjaka George IV izay any avaratra atsinanan'ny kianja. Misy plinth fahefatra ao amin'ny plaza izay foana. Fantatra amin'ny hoe Plintio fahefatra, izay taorian'ny nametrahany ny sarivongan'i William IV, dia foana foana. Hitanao any avaratra andrefan'io izy ary samy hafa ny atiny. Ny ankehitriny dia misy ifandraisany amin'ny zavakanto ankehitriny.
Tamin'ny 1876 ny Fepetra amperora tao anatin'ny rindrin'ny terrasika avaratra no misy azy ireo. Any ivelan'ny cafe, eo amin'ny kianja, no ahitanao vaovao momba azy ireo. Androany dia mbola azonao atao ny manamarina ireo zava-maneno taloha sy fandrefesana ary mampifandray azy ireo amin'ireo metatra na tongotra ankehitriny. Ireo fepetra Imperial ireo dia nafindra rehefa naorina ilay tohatra. Toerana iray "taloha" iray hafa dia ny tranoben'ny polisy taloha izay atsimo atsinanan'ny kianja, miaraka amin'ny jirony tany am-piandohana nanomboka tamin'ny 1826. Anio no trano fanatobiana entana kely nefa mbola ao ihany izy io.
Rehefa nandeha ny fotoana dia niova fanovana ny kianja: ny terrasika avaratra dia lasa mpandeha an-tongotra ankehitriny ary mamela ny fifandraisana amin'ny National Gallery, ary cafe, trano fidiovana ho an'ny daholobe ary fidirana ho an'ireo sembana.
Ny tena marina dia hevitra tsara tokoa ny fitsidihana ny kianjan'i Trafalgar satria ny kianja dia voahodidin'ny tranombakoka, habaka ara-kolontsaina ary tranobe manan-tantara tsy ho hita any London. Ary, angamba, mandritra ny fitsidihanao dia afaka mahita fihetsiketsehana na fihetsiketsehana ianao satria mahazatra azy ireo ny mitranga eto indrindra amin'ny faran'ny herinandro.
Ao koa Navidad napetraka ny hazo cemara izay matetika no natolotry ny tanànan'i Oslo ho fankasitrahana ny fanampiana anglisy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Raha mandeha amin'ny Krismasy ianao dia ho hitanao io hazo kypreso io ary raha miditra ianao Taona vaovao ianao dia afaka ny ho iray amin'ireo mpanatrika ny fankalazana ny fanovana ny taona. Tsy fety karakarain'ny tanàna izany fa fanaon'ny olona ny tonga eto mba hankalaza. Toy izany koa amin'ny fankalazana ny taom-baovao Sinoa ary, voajanahary, isaky ny mahatsiaro ny Adin'ny Trafalgar ny 21 Oktobra rehefa tonga ny Royal Royal Navy Cadet Corps.
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Kianjan'ny Trafalgar
Azonao atao ny tonga any amin'ny fantsona mampiasa ny Bakerloo sy ny Northern Lines, miainga ao amin'ny Charing Cross Station.
Amin'ny bus ihany koa: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 53, 77A, 88, 91, 139, 159, 176, 453.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Trafalgar Square, tsy maintsy atao any Londres